Reer Burco ayaa yidhaahda: "Ala maxaa dhakh nabiga baratey". Midkaas ayaan soo xusuustaa markaan arko mid Ina-Gumeed gudhuu ah oo afka kasoo xumbeynaya oo Soomaalinimo ku dhuumanaya. Ileyn waa "looma-Ooyaan" aan laheyn tol xiniinyo leh oo wax ka celin kara. Inta aan ka aheyn cal-calka buluukiga ah ee uu isku dabrayo.
Waxaan kaloo soo xusuustey in Mr Mahamed BK uu yahay nin uu adeer u yahay gabayaagii weynaa ee Reer Sanaag ee Xaaji Aadan Af-qalooc. Oo ahaa, ninkii qeexista Soomaalinimo iyo afkoodaba si dhaba oo cilmiyeysan loogu soo gaadhay. Xornimaddii helisteedana kaga soo qayb qaatey gabayo taariikh galey.
Laakiin "Ina Gudhuu-may-fadaase", oo higaada, nuxurka iyo naxwaha Af-Soomaaliguba ay ugu muuqaneyso "af-giriig iyo af-laatiin", yaa u "tafsiiraya" Somalinimo waxa ay tahay?
Iyo wax dhaqanka ummadeed ah ee ay salka ku heyso. Kuwaas oo ah wax yaabo ku jira suugaantii badneyd ee Xaaji Af-qalooc nooga tagey iyadda oo gabayo ah oo taariikhda Sooyaalka Soomaaliyeed ku jira.
Markaa, waa halkii reer Burco'e, "ala maxaa dhakh-weyn nabiga baratey". Ana waxa aan odhan oo aan ku darey:
".......Alla Maxey Gudhuu iyo Gocoro Gaa-gaab ahi, Geesi Guulaystey Kadaba Guuxeen......"